Ahoana ny fomba fandraisam-peo Audio Premium Quality amin'ny alàlan'ny Internet | Martech Zone
Sabotsy, Martsa 18, 2017 Alatsinainy Martsa 27, 2017 Douglas Karr
Miaraka amin'ny vahaolana toy ny Skype, rindrambaiko teleconferensi ary VOIP, dia hieritreritra ianao fa ny fandraketana olona roa manerantany dia ho zavatra mora indrindra eran'izao tontolo izao. Io dia tsy. Ary mahasosotra ihany.
Azo antoka, raha manana olona roa miaraka amin'ny fitaovana tena tsara sy fantsom-pifandraisana avo lenta ianao dia azo atao izany. Ny olana dia mipoitra rehefa manana vahiny amin'ny podcast anao erak'izao tontolo izao ianao izay tsy manana fitaovana na bandwidth. Ny valiny dia matetika ianao no manana tafatafa izay ahitanao fa mahatalanjona, ary ny mpitsidika anao dia toa amboarina amin'ny tadin-trondro sy tin.
Ny audio tsara kalitao dia mihinana ny 320 na bandwidth maro hafa, noho izany dia tsy fahita firy ny serivisy fandefasana raki-peo hanery na handefasana audio hampihena ny takian'ny fantsom-pifandraisana na hanasoavana ny mpanjifa manana bandwidth ambany. Na izany na tsy izany dia tsy tsara ho anao izany rehefa manoratra.
Andao handeha hamaky sehatra sy olana mahazatra:
Skype - Na dia eken'ny besinimaro aza ny Skype ary matetika misy ao ambadiky ny afon'afo, ny feo alefa dia tsy amin'ny kalitao feno foana. Na dia miaraka amin'ny mikrô sy ny bandwidth lehibe aza, ny feo dia afaka mametaka sy tsy manana ny tsy fivadihan'ny loharano tsirairay. Ary raha mampiasa recorder Skype ianao dia tsy afaka miasa tsy miankina amin'ny làlan'ny feo tsirairay.
Rindrambaiko Teleconference - Skype ho an'ny orinasa, Webex, GoToMeeting, Uberconferensi… sehatra mafy orina rehetra saingy misy fihemorana vitsivitsy ry zareo. Voalohany, tsy ny rehetra no mampiasa azy ireo. Faharoa, matetika ny orinasa dia manakana ny seranan-tsambo izay mety mitaky rindrambaiko. Fahatelo, tsy manana ny kalitaon'ny feo tsara indrindra foana koa izy ireo. Fahefatra sy ratsy indrindra - raha sendra lavo ianao, maro amin'ireo sehatra no tsy mamela anao hirotsaka indray.
VOIP - hieritreritra ianao aorian'ny teknolojia an-tariby efa ho zato sy sasany izay haharesy antsika. Izahay tsy manao. Na aiza na aiza misy ny teknolojia VOIP, saingy mikorontana. Matetika ianao dia mifandray amin'ny alàlan'ny serivisy sy sosona marobe, manampy fotoana iray ho an'ny olana. Ary, toy ny teknolojia fifandraisana hafa, izy ireo dia mamela ny tsy fivadihana ambany kokoa hiatrika ny fahafahan'ny bandwidth isan-karazany an'ny mpanjifany.
Soa ihany fa nanjary nalaza tokoa ny podcasting fa misy serivisy vitsivitsy miseho handresena ireo olana ireo.
Serivisy fandraisam-peo Podcast
BlogTalkRadio - nanana mpanaraka be dia be tao amin'ny BTR izahay saingy namela azy io tamin'ny farany noho ny olana ara-kalitao eo amin'ny sehatr'izy ireo. Izahay dia nandao ny fifandraisan'izy ireo amin'ny tranonkala tena izy ary nifidy ny hampakatra ny atiny. Na izany aza, raha vao manomboka ianao, dia mila zavatra tsotra be, izany angamba no vahaolana mety. Tamin'ny fikatsahana raki-peo tsara dia be loatra izany.
Bodalgo - Bodalgo dia tsy serivisy natsangana hatrizay ho an'ity… namboarina izy io mba hahitana talenta am-peo sy fandikan-teny an-tserasera ary handraketan'izy ireo ny valiny Na izany aza, Bodalgo dia nampiroborobo ny serivisy hampiasain'ny podcasters. Mahazo URL tsy manam-paharoa ianao izay mampifandray ny vahininao, manome alalana amin'ny mikrôfony, ary mifandray ianao ary afaka manoratra ny feo avo momba ny fidelity eo an-toerana. Bodalgo koa dia nanampy ny fahaizan'ny horonantsary vao tsy ela akory izay!
ipDTL - Hiezaka hametraka a i ipDTL peer to peer fifandraisana eo amin'ny vahiny ary manome interface mifototra amin'ny Chrome amin'ny fandraketana ny feo. Ny serivisy dia miaraka amin'ny pejy fampisehoana natokana ary ny vahiny aza afaka miantso-in raha tian'izy ireo.
RINGR - Ity serivisy ity dia mety manana ny safidiko ho safidy tsara indrindra, saingy mbola tsy misy fetrany ihany. Ny antony mahatonga ahy hiankina amin'io lalana io dia satria RINGR dia manolotra kinova birao sy fampiharana finday. Raha azonao atao ny mampakatra ny mpitsidika anao hampidina ny rindranasa finday ary manana mikrô izy ireo dia miasa ianao!
Source-Connect - Fanoloana ISDN manara-penitra ny indostria miaraka amina endri-javatra lalim-paka ho an'ny filanao fandraketana feo sy fanaraha-maso rehetra. Raketo an-tsoratra sy araho maso na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao, amin'ny fampiasana ireo fitaovanao matihanina.
Zencastr - Nozarainay momba Zencastr taloha, serivisy fandraisam-peo an-tserasera marobe marobe ho an'ny podcast. Mampalahelo fa mila mpizaha birao mila alalana amin'ny mikrô izy io.
Ary ahoana izany mikrô izany? Raha miasa mivantana amin'ny Mac na iPhone-nao ianao dia mpankafy be aho Apogee's MiC 96k. Raha podcaster ianao izay mandeha ary mila manoratra vahiny iray na maromaro mivantana amin'ny iPhone-nao dia nandefa ahy i Shure MV88 mikraoba condenser, ary mahavariana!
Fanamarihana: Hahita fanandramana lehibe momba ny Zencastr, RINGR, ary IPDTL ianao amin'izao fotoana izao, aiza Adam Ragusea dia nanoratra lahatsoratra lalina isaky ny serivisy sy ny fahaizany.
Fambara: mpiara-miasa amin'i RINGR izahay izao ary nampiasa ny anay affiliate link amin'ity lahatsoratra ity. Nampiasainay koa ny rohy mpampifandray an'i Amazon ho an'ireo mikrô.
Tags: blogtalkradiobodalgoAntso momba ny fihaonambeipdtlPodcast Marketingpeer to peerserivisy podcastpodcastingringrSkypeteleconferenceVOIPzencastr
Mar 21, 2017 amin'ny 12: 39 AM
Doug, RadioYo dia sehatra iray hafa ahafahanao manoratra feo. Azonao atao ny mampiasa ny sehatra amin'ny fomba roa. Azonao atao ny mandefa seho mivantana ary manana vahiny sy mpiantso maromaro miantso na mampakatra fizarana podcast. Miankina aminao ny fomba fampiasanao ny lampihazo ary maimaim-poana izany na amin'ny fomba ahoana.